Wadanka Mareykanka oo hub loo qaadanayo Iskuulada & Kaniisadaha+SAWIRO – SBC
Wadanka Mareykanka oo hub loo qaadanayo Iskuulada & Kaniisadaha+SAWIRO
Posted by editor on December 21, 2012 Comments
Ka gadaal markii goobaha waxbarashada wadanka Mareykanka ay ku soo bateen dilalka iyo toogashada hubaysan ayaa waxaa dib loo eegayaa hanaanka sharciyada hub haysashada dalkaasi oo ah mid dadka caadiga ah hub noocyo kala duwan leh ay guryaha u dhooban yihiin.
Toogashadii ugu dambeysay ee Khamiistii 13-ka bishan ka dhacdey gobolka Connecticut oo nin argagixiso ah uu ku diley 26 qof oo labaatan ka mid ah yihiin caruur iyo waliba hooyadiis, ayaa dhalisay muran weyn oo la xiriira sharcinimada qoryaha shacabku haystaan, iyadoo ninkan hubka uu dadka ku xasuuqay uu ahaa laba qori iyo laba baastooladood oo ay Hooyadiis laheyd.
Gobolka Michigan ayaa Jimcadii laga dhaqan galiyey sharci uu ansixiyey aqalka Senate-ka Mareykanka kaasi oo gobolkaasi u fasaxaya in la qaadan karo hubka qarsoon (concealed weapons) kaasi oo ay ka mid yihiin Baastoolada iyo qoryaha gaagaaban ee aan muuqan ee qofku gashan karo guntiga ama kil-kisha, iyadoo hubkan si xadiyasan loogu ogol yahay in lagu qaato Kaniisadaha, Iskuulada, Garoomada Ciyaaraha iyo waliba xarumaha xanaanada Caruurta.
Laakiin talaabadan waxaa si adag uga biyo diiday qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolkaasi oo sheegay in go’aankan uu sii balaarinayo dhibaatada ku aadan dilalka iyo toogashada hubaysan ee ka dhacaysa goobaha bulshadu isagu timaado.
“Hadii aad Baastoolad ku haysato goobaha lagu badan yahay, xaqiiqdii waa mid sii balaarinaysa xasquuqa” ayuu yiri Steve Dulan oo ah qareenka ururka Isbahaysiga gobolka Michigan ee hub lahaanshaha
“Dib u raac taariikhda xitaa in ka badan 10 sano taariikhda Mareykanka, waxaad ka helaysaa in gumaadka toogashada baahsan ay ka dhacayeen goobaha loogu yeeray gun free zone (aaga xorta ka ah hubka)” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Steven.
SBC International Stockholm
Yuusuf claahi says:
Waxay xuntahay in dowladu ay fasaxdo in hubka in lala galo meelaha ay shacabku ku badan yihiin sababtoo ah waxaa dhimay dad badan oo waxba galabsan waxaan aad ugu tacsiyaynayaa anigoo ah yuusuf claahi eheladii ay ka geriyoodeen caruurtii la xasuuqay iskuulka waxaan ale idinku baryayaa in ilaah inuu ubadkale idinku badalo